Qiimeeynta Farshaxanada: Munaasabadda Fanaanada McKnight Artist
Dhaqdhaqaaqa dheer ee Farshaxanimada
Halkan McKnight Foundation, dabbaaldegga sanadlaha ah McKnight Artist Fellows waa mid ka mid ah fiidiyowyada ugu wanaagsan ee sanadka. Bishii Sebtembar, waxaan u dabbaaldegnay sanadkan 2015-ka cusub ee 42-ka ah ee farshaxanimada leh oo ay wehliyaan siddeed wada-hawlgalayaasha maamul ee ka dhigaya barnaamijkeena suurtogalka ah. The dhacdo waa fursad ay dadka kale u la kulmaan oo ay la qabsadaan dadka kale, waxay ku beeraan abuurka xiriirka mustaqbalka iyo iskaashiga juquraafi iyo mabaadi'da.
Mike Norman oo ah Farshaxanka Farshaxanka ah ee "Qiimeeynta Fanka"
Muddo ka badan 30 sano, in ka badan 1,500 farshaxan oo shakhsiyadeed ayaa taageero ka heley Barnaamijka Macmiilka ee McKnight Artist. Barnaamijkan waxaa la siiyaa $ 25,000 oo ah abaalmarin ku salaysan gunno lacageed oo lagu abaalmariyo abaalmarinada ay ka mid yihiin farshaxanada farshaxanka, qoobciyaariyeyaasha iyo qoob-ka-cayaaraha, muusikada iyo muusikada, riwaayadaha iyo farshaxanada farshaxanka, fannaaniinta farshaxanka, qorayaasha iyo fannaaniinta warbaahinta. Iyada oo la taageerayo fannaaniintaas, waxaan ka caawinaynaa inay sii wadaan gacan ka geysashada dowlad-dhaqameedka iyo dhaqanka qaniga ah ee aan ku noolahay.
Inaad qaadatid Deeper Look
Munaasabadan sanadkan, waxaan soo bandhignay "Ictiraafka Farshaxanada," fiidiyoow cusub oo soo bandhigaya Macaamiilka Xoogsatada ee McKnight.
Fiidiyowga, waxaad ka maqli doontaa saaxiibbada, guddiga McKnight iyo xubnaha shaqaalaha, barnaamijyada wada-hawlgalayaasha, iyo asxaabyahannada danaha leh ee muhiimada iyo saameynta iskaashiga nolosha ee farshaxanada shaqada. Barnaamijka farshaxanka (oo ay ku jiraan abaalmarinta isboortiga ee farshaxanada) wuxuu ka mid ahaa meelihii ugu horeeyay ee barnaamijka rasmiga ah ee ay aasaasay Hay'adda McKnight Foundation. Xaqiiqdii bilowga, guddiga ururka iyo qoysku waxay aqoonsadeen awoodda farshaxan-yahanka, dadka sameeya shaqada adag ee samaynta farshaxanka aan ku raaxeysano, si loo kobciyo loona xoojiyo bulshooyinka.
The McKnight Artist Fellows, fasalka 2015
Farshaxani wuxuu ka ciyaaraa kaalin gooni ah oo muhiim ah oo ka jirta horumarinta caafimaadka dadka iyo bulshada. Barnaamijkeena guurka waa mid ka mid ah siyaabo badan oo McKnight's Barnaamijka Farshaxanka wuxuu ka shaqeeyaa sidii loo xoojin lahaa nidaamka hiddaha farshaxanka ee Minnesota. Sanadkii la soo dhaafay, McKnight wuxuu bixiyay in ka badan $ 9 million si uu u taageero taageerayaasha Farshaxanka iyo fanka iyo ururada dhaqanka, $ 2 million oo si toos ah u tagay si ay u taageeraan farshaxanada shaqsi ahaan shaqeeya. Sida aan ka ogaanno CreativeMN warbixinta iyo daraasadaha kale ee dhawaanahan, farshaxan-yahanno iyo tabarucidooda ayaa muhim u ah dhaqaalaha Minnesota iyo tayada sare ee nolosha.
Waxaan rajeyneynaa inaad ku raaxeysan laheyd oo aad wadaageyso "Qiimeeynta Fanka"Una hambalyeeyo sanadkaan McKnight Artist Fellows markaad aragto!